တရုတ်နိုင်ငံက ပစိဖိတ်ကျွန်းနိုင်ငံများနှင့် နီးကပ်သောဆက်ဆံရေးထူထောင်ရန် ဆန္ဒရှိကြောင်း နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ပြောကြား - Xinhua News Agency
တရုတ်နိုင်ငံသည် ပစိဖိတ်ကျွန်းနိုင်ငံများနှင့် ပိုမိုနီးကပ်သော ဘက်စုံမဟာဗျူဟာမြောက် မိတ်ဖက်နိုင်ငံဆက်ဆံရေး တည်ဆောင်ရွက်ရန် ဆန္ဒရှိကြောင်း တရုတ် နိုင်ငံတော်ကောင်စီဝင်နှင့် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဝမ်ရိက အောက်တိုဘာ ၂၁ ရက်၌ ပြောကြားခဲ့သည်။ဝမ်က ပထမဆုံး တရုတ်-ပစိဖိတ်ကျွန်းနိုင်ငံများ၏ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများ အစည်းအဝေးအား ဗီဒီယိုလင့်ခ်မှတစ်ဆင့် သဘာပတိအဖြစ် ဆောင်ရွက်နေစဉ် မှတ်ချက်ပြုခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
တရုတ်နိုင်ငံနှင့် ပစိဖိတ်ကျွန်းနိုင်ငံများအကြား ဆက်ဆံရေးသည် အခြားမတူညီသောဒေသများ၊ အရွယ်အစားများနှင့် စနစ်များမှ နိုင်ငံများအကြား ရင်းနှီးစွာကူးလူးဆက်ဆံမှုများ၊ စည်းလုံးညီညွတ်မှုနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု၏ ဥပမာကောင်းတစ်ခု ချမှတ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဝမ်က ဆိုသည်။
ထို့ပြင် ဝမ်က မူဝါဒရေးရာ ဆက်ဆံမှုနက်ရှိုင်းခြင်း၊ အပြန်အလှန်နားလည်မှု မြှင့်တင်ခြင်း၊ တစ်နိုင်ငံ၏ ဘုံအကျိုးစီးပွားများနှင့် အဓိက စိုးရိမ်ပူပန်မှုများနှင့် ဆက်စပ်သောကိစ္စများအပေါ် တစ်နိုင်ငံကပံ့ပိုးပေးခြင်း၊ တရုတ်နိုင်ငံနှင့် ပစိဖိတ်ကျွန်းနိုင်ငံများအကြား ပုံမှန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအစည်းအဝေးများအတွက် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းတစ်ရပ် ထူထောင်ခြင်း အတွက် တိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့သည်။
တရုတ်နိုင်ငံအနေဖြင့် ပစိဖိတ်ကျွန်းနိုင်ငံများသို့ ကာကွယ်ဆေးများနှင့် ကူးစက်ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေး ပစ္စည်းများ ဆက်လက်ပံ့ပိုးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ တရုတ်-ပစိဖိတ်ကျွန်းနိုင်ငံများ အရေးပေါ်ထောက်ပံ့ရေးရန်ပုံငွေ ထူထောင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ကပ်ရောဂါတိုက်ဖျက်ရေးအတွက် တရုတ်နိုင်ငံနှင့် ပစိဖိတ်ကျွန်းနိုင်ငံများထံ ဖြည့်စွက်မတည်ရန်ပုံငွေဖြည့်တင်းသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဝမ်က ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့သည်။
ထို့ပြင် တရုတ်နိုင်ငံသည် နိုင်ငံရေးနှောင်ဖွဲ့မှုမပါဝင်ဘဲ ကျွန်းနိုင်ငံများအား စီးပွားရေးနှင့် နည်းပညာအကူအညီများ ဆက်လက်ပံ့ပိုးပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းလည်း ဝမ်က ပြောခဲ့သည်။
တရုတ်နိုင်ငံနှင့် ပစိဖိတ်ကျွန်းနိုင်ငံများအကြား ငါးဖမ်းလုပ်ငန်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ဖိုရမ်ကို ယခုနှစ်အတွင်း ကျင်းပသွားရန်ရှိကြောင်း၊ ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုလျှော့ချရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုစင်တာတစ်ခုကိုလည်း ကျွန်းနိုင်ငံများ၏ လွတ်လပ်ခွင့်နှင့် စဉ်ဆက်မပြတ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု မြှင့်တင်ရာတွင် အထောက်အကူဖြစ်စေရန် တည်ထောင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ဖြည့်စွက်ပြောခဲ့သည်။
ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအနေဖြင့် တရုတ်နိုင်ငံသည် တရုတ်နှင့် ပစိဖိတ်ကျွန်းနိုင်ငံများအတွက် ရာသီဥတုပြောင်းလဲခြင်းဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုစင်တာ တည်ထောင်ရန် ဆုံးဖြတ်ထားကြောင်း၊ ကျွန်းနိုင်ငံများ၏ အပြာရောင်ပစိဖိတ် ကနဦးဆောင်ရွက်ချက်ကို ထောက်ခံခြင်းနှင့် ပစိဖိတ်ဒေသဆိုင်ရာ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အစီအစဉ်အား ဆက်လက် ငွေကြေးထောက်ပံ့သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဝမ်က ပြောခဲ့သည်။
ထို့ပြင် တရုတ်နိုင်ငံသည် ပညာရေး၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ ကျန်းမာရေးနှင့် အားကစားကဏ္ဍများတွင် ပစိဖိတ်ကျွန်းနိုင်ငံများနှင့် ဖလှယ်မှုများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ တိုးချဲ့သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ဆိုသည်။
အမေရိကန်၊ ဗြိတိန်နှင့် ဩစတြေးလျ သုံးနိုင်ငံကြား နျူကလီးယားရေငုပ်သင်္ဘောပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုသည် နျူကလီးယားအန္တရာယ်များတိုးပွားလာခြင်း၊ လက်နက်ပြိုင်ပွဲများ အစပျိုးခြင်းနှင့် ဒေသတွင်း ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် တည်ငြိမ်ရေးကို လျော့ပါးခြင်း ဖြစ်ပေါ်နိုင်မည်ဟု ဝမ်က မှတ်ချက်ပြုခဲ့သည်။
တရုတ်နိုင်ငံကမူ ၎င်း၏အုတ်မြစ်နှင့် ပစိဖိတ်တောင်ပိုင်း နျူကလီးယားကင်းမဲ့ဇုန်အဖြစ် နျူကလီးယားလက်နက် မပြန့်ပွားရေးစာချုပ် (Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons) အား လက်နက်မပြန့်ပွားရေး နိုင်ငံတကာအစိုးရများနှင့် ပူးတွဲထိန်းသိမ်းရန် ပစိဖိတ်ကျွန်းနိုင်ငံများနှင့် အတူတကွလုပ်ဆောင်ရန် ဆန္ဒရှိကြောင်း သိရသည်။
အဆိုပါ အစည်းအဝေးသို့ ခီရီဘာတီ၊ ဖီဂျီ၊ တွန်ဂါ၊ နီဥူအေ (Niue) ၊ ပါပူအာနယူးဂီနီ၊ ဗန်နာတူ (Vanuatu) ၊ မက်ခရိုနီးရှား၊ ဆော်လမွန်ကျွန်းစု၊ ဆာမိုအာ (Samoa) စသည့်နိုင်ငံများမှ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးများနှင့် ကိုယ်စားလှယ်များအပြင် ပစိဖိတ် ကျွန်းနိုင်ငံများဖိုရမ် အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်တို့ တက်ရောက်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ကျွန်းနိုင်ငံများတွင် ပါဝင်သည့် ကိုယ်စာလှယ်များကလည်း ကာလရှည် ကူညီ ပံ့ပိုးပေးခြင်းအတွက် တရုတ်နိုင်ငံအား ကျေးဇူးတင်ကြောင်း၊ တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီ တည်ထောင်ခြင်းရာပြည့်ပွဲအတွက် ဂုဏ်ယူကြောင်းနှင့် ၎င်းတို့အနေဖြင့် တရုတ်တစ်နိုင်ငံတည်းမူဝါဒကို အခိုင်အမာ လိုက်နာကြောင်း ထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့သည်။
တရုတ်နိုင်ငံ၏ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ဆောင်ရွက်ချက်အား ထောက်ခံရန်၊ ရပ်ဝန်းနှင့် ပိုးလမ်းမ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု နက်ရှိုင်းရန်နှင့် နှစ်ဘက်ကြား ဘက်စုံမဟာဗျူဟာမြောက်မိတ်ဖက်ဆက်ဆံရေး အဆင့်သစ်သို့ မြှင့်တင်ရန် ဆန္ဒရှိကြောင်းလည်း ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့သည်။ (Xinhua)
BEIJING, Oct. 21 (Xinhua) — Chinese State Councilor and Foreign Minister Wang Yi said on Thursday that China is willing to work with Pacific Island countries foracloser comprehensive strategic partnership.
They also expressed their willingness to support China’s Global Development Initiative, deepen cooperation on the Belt and Road, and promote the comprehensive strategic partnership between the two sides toanew level. Enditem
Photo : Chinese State Councilor and Foreign Minister Wang Yi chairs the first China-Pacific Island Countries Foreign Ministers’ Meeting held via video link on Oct. 21, 2021. (Xinhua/Yan Yan)